कामी हुँ कहाँ-कहाँ लगाउँछौ ताल्चा ? | Jwala Sandesh
कामी हुँ कहाँ-कहाँ लगाउँछौ ताल्चा ?
विश्वास खड्काथोकी | प्रकाशित मितिः मङ्लबार, फाल्गुन २२, २०७४ ::: 249 पटक पढिएको |
यो लेखिरहँदा म नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकको समाचार डेक्समा छु । र, मलिन अनुहार बनाएर किबोर्ड थिचिरहेको छु । ‘एउटा कामीको ‘वीर्य’ भएकैले मैले राजधानीमा कोठा भाडामा पाइनँ !’ सँगै सम्झिरहेछु, समृद्ध मुलुकको सपना ।
एउटै फ्ल्याटमा आधा दर्जन मानिस बस्न गाह्रो थियो । त्यसैको विकल्प खोजेका थियौँ । जसमा बस्ने सम्झौता भएको थियो, रिमराज सुनार, मिलन विश्वकर्मा र विक्रम सुनार । मिलन र विक्रम पत्रकारितामै छन् । रिमराज लोकसेवाको तयारीमा व्यस्त ।आफैँलाई सरसर्ती हेरेँ । आँखा, नाक, मुख, छाला, हात–खुट्टा, कपाल मान्छेका जस्ता लागेनन् ! जनावरका जस्ता लागे पनि कसरी भनूँ, मेरो घरबेटीले आफन्तलाई भन्दा बढी माया ‘पप्पु’लाई गर्नुहुन्छ ।
जंगबहादुर राणाका पालामा जारी गरिएको २०१० सालको मुलुकी ऐनले नीति नै बनाएर दलितमाथि विभेद गरियो । यति सम्म कि दलितले पाउने राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारलाई निश्चित बनाइयो । यद्यपि, मनुस्मृति कालदेखि नै दलित समुदायले विभेद भौग्दै आएका थिए । २००७ र ०१५ सालमा आएर जात र धर्मका आधार मा भे दभाव नगरि ने कुरा ऐनमा उल्लेख गरियो । २०२० भदौ १ गतेको मुलुकी ऐ नमा कानुनतः ने पाली समाजलाई जातीय भे दभावबाट मुक्त राख्ने प्रस्ट पारियो ।
प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै आएको ०४७ को संविधानमा आएर मात्र जातीय छुवाछुत गर्ने लाई दण्डित गर्ने उल्लेख गरियो । लामो आन्दोलन र संघर्षबाट जातीय छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐन २०४८ जारी गरियो । जसमा भनियो– ‘कसुर गर्नेलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच सयदेखि २५ हजारसम्म जरिबाना वा दुवै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ यस्तो कानुनलाई धेरै हदसम्म एनजिओ र आइएनजिओका पसल थापेर बसेकाहरूले भजाइरहे । राजनीति गर्नेहरूका लागि भाषणको मेलो बनेको छ । तर, विभेदको ग्राफ ओरालो लाग्न सकेको छ । राजधानीमै मजस्ताहरूले विभेद खेपिरहेका छन् । नेताहरूले भाषण त गर्छन्, परिणाम कहिल्यै खोज्दैनन् । कानुनी असरको मापन गर्दैनन् । राजनीतिक नेतृत्वबाट जबसम्म विभेदको परिणामको माग हुँदैन, तबसम्म दलितहरू ‘बिस्ट’का अगाडि ङिच्च परेर शिर झुकाउन बाध्य भइरहनेछन् । जुनसुकै क्षेत्रको मूलधारमा आउन हिच्किचाइरहनेछन् ।
मेरो राजधानीको हरेक बिहान यस्ता थुप्रै विकृतिसँग लज्जित हुँदै सुरु हुन्छ ।
मलाई सबैखाले विभेदबाट मुक्त भएको सुन्दर नेपाल महसुस गर्ने रहर छ ।
वल्र्ड बैंकको रिसर्च
अन्त्यमा मेरो स्टाटसमा भीम सुनारको प्रतिक्रिया सापटी लिन जरुरी ठानेँ । स्टाटस लेखेको थिएँ, ‘आज मैले राजधानीमा कोठा पाइनँ, नछोइने भएर ।’ सुनारले कमेन्टमा लेखे, ‘मेरो राजधानीको हरेक बिहान यस्तै थुप्रै विकृतिसँग लज्जित हुँदै सुरु हुन्छ । सबै खालको विभेदबाट मुक्त भएको सुन्दर देश महसुस गर्ने रहर छ ।’ enayapatrika